Patreon lasa fisehoan'ny fiarovana | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny andro taloha, afaka nanohy naneho ny heviny tamin'ny fomba fandokoana ny mpanakanto misaotra ny tarehin'ny patron izay nanome ny vola ilaina mba hahafahan'ny mpanao hosodoko nanokana ny tenany amin'ny zavatra tiany na tena azony.
Mandeha io isa io anio lampihazo mpihaza toa an'i IndieGoGo na Kickstarter, na any amin'ny firenentsika Verkami. Saingy misy ny iray izay nanjary fironana ary nanjary nalaza teo amin'ireo mpanakanto sy sary an-tsary. I Patreon ity ary milamina tsara mba hahafahan'ny mpanakanto mahazo famatsiam-bola avy amin'ireo olona altruistic izay hamela azy ireo handefa boky misy ohatra toy ny tetikasa maro hafa.
Mpanakanto marobe no afaka nahita ny sangan'asany vita tamin'ny sehatra fidiram-bola toa an'i Patreon. Plataform noforonin'i San Yam sy Jack Conte tamin'ny 2013 ary izany tamin'ny voalohany dia voafetra tamin'ny sary hosodoko, kolontsaina ary poezia, fa androany dia nihoatra ny andrasan'izy ireo hatrizay.
Se afaka manampy fifehezana bebe kokoa izy ireo toy ny sary, sary mihetsika, sary ary na ny youtuber aza. Amin'ny alàlan'ireto youtuber ireto no nahitan'i Patreon lalan-drà satria izy ireo ihany no mamokatra horonantsary, rakipeo na sarimihetsika maimaim-poana. Ireo mpanao gazety ihany koa no mivory eo amin'ity sehatra ity mba hahafahan'izy ireo manohy manome vola karazana asa fanaovan-gazety kalitao hafa izay tsy manana ny toerany amin'ny haino aman-jery mahazatra.
Ao amin'ny Patreon dia mahita fitoviana vitsivitsy amin'ireo sehatra mpiaro hafa isika. Ireo "patron" dia afaka manohana tetikasa tokana an'ny artista na ny asany matihanina iray manontolo. Amin'ny fotoana andraisan'izy ireo an'io andraikitra io dia manome vola be izy ireo isaky ny manomboka tetikasa ilay mpamorona. Io vola io dia azo ferana isam-bolana.
Tombony ho an'ny "patron" dia tamin'ny pas teo aloha hijery ny zavatra noforonin'izy ireo, safidio ireo lohahevitra ho an'ny famoronana manaraka na hevitra maro azo omena. Miaraka amin'i Patreon, omena ny lalana ireo mpanakanto mitady ny toerana misy azy ireo ary amin'izao fotoana izao dia tsy afaka miaina afa-tsy amin'ny sangan'asany, izay mamela azy ireo hanohy haneho ny heviny.
Raha fintinina, a hevitra tsara ilay ao ambadik'i PatreonKa raha mpanakanto ianao ary mitady "patron" marobe amin'ny Internet izay hampiroborobo sy hampisondrotra ny asanao matihanina, inona no andrasanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Patreon, ny sehatra fialokalofana ho an'ny artista